Chan Myae Aung @ Nancy | Blog - Knowledge, Career, Family
Chan Myae Aung @ Nancy
Mar 30 2018 MSI Admin 0
ကိုယ့်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းရမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီး သေးငယ်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရင်တောင် Scholarship လျှောက်လို့ရပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့တဲ့ (၄၀%) ပညာသင်ဆုရမန္တလေး ကျောင်းသူ မချမ်းမြေ့အောင်@Nancy ၏အင်တာဗျူး။
မချမ်းမြေ့အောင်@Nancy ၊ အသက်(၁၉)နှစ်၊ အမှတ်(၁၇၆)၊ (၃၂)လမ်း(၈၁x၈၂)လမ်းကြား၊ ချမ်းမြေ့သာဇံမြို့နယ်မှာနေပါတယ်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ယခုတက်ရောက်သင်ယူနေတဲ့ ကျောင်းအမည် နဲ့ဘာသာရပ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ကျောင်းပညာရေးကို (၁၁)တန်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Webster University (Thailand Campus) မှာ BA in Management ကို
(Marketing) အထူးပြုဘာသာရပ်ကိုသင်ယူနေပါ တယ်။
၃။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ် Webster University (Thailand Campus) ကိုဘယ်လိုသိပြီးကျောင်းတက်ဖို့ဆုံး ဖြတ်ခဲ့တာလဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျောင်းခွဲဖွင့်ထားတဲ့ Webster University မှာစာသင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိ တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်း MSI ကနေတဆင့်သွားထားကြတော့
တခြားဆွေးနွေးပွဲတွေကို သွားတက်ပြီး လေ့လာခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ သူငယ်ချင်းတွေညွှန်တဲ့ MSI နဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့ Webster University မှာပဲကျောင်းတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
၄။ Myanmar Search International (MSI) Oversea Education ကပညာသင်ဆုလျှောက်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ် မှာညီမလေးဘက်ကဘာတွေဝိုင်းပြီး ကြိုးစားပေးခဲ့ရသေးလဲ။
ပညာသင်ဆု(၄၀%)ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ညီမလေးဘက်ကသိပ်မကြိုးစားလိုက်ရဘူး။ MSI ကပြောတာတွေကို သေချာနားထောင်ပြီး ပညာရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို MSI ကအမတွေလိုချင်တဲ့အချိန်မှုာ
သမီးဘက် ကကျောင်းလျှောက်ဖို့ပေးရတယ်။ သိပ်မပင်ပန်းလိုက်ဘူး။ သမီးကမန္တလေးမှာရှိပေမယ့် ရန်ကုန်ကိုလူ ကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုဘဲ အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ကျောင်းသား Visa
လျှောက်တာကအစ ရန်ကုန်ကိုတစ်ခေါက်မှမလာလိုက်ရဘူး။ ပညာရေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို စုံစိအောင်လုပ်ရတာတကယ် တော့ အရမ်းပင်ပန်းပေမယ့် ပင်ပန်းတယ်လို့လုံးဝမခံစားရအောင်
အားလုံးပြီးသွားတယ်။ စိတ်လည်း အရမ်းရှည်တယ်။ အဲ့အတွက်လည်း MSI ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျောင်းသား Visa ၀င်ပြီးသားစာအုပ် ကအစ ညီမတို့ဆီကိုအိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ပေးတဲ့အတွက် အစစအရာရာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ ကြီးကြီးမားမားကြီးဝိုင်းကူလိုက်ရတာမျိုးမရှိဘူး။
၅။ အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်အပေါ် ညီမလေးရဲ့အမြင်နဲ့ပညာသင်ဆုလျှောက်ဖို့ ကိုယ်ပြီးထားတဲ့ပညာအ ရည်အချင်းအပြင်တခြားဘာတွေလိုအပ်လဲ။
ဆရာတွေစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျောင်းစာတွေကိုလိုက်နိုင်ဖို့ English skills ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စာသင်ခန်းထဲမှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာအပြင် အတန်းထဲမှာအမေးအဖြလုပ်တာတွေ (သို့)
Presentation လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိဖိုိ့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်မှာသေးငယ်တဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိရင်တောင် ပညာသင်ဆုကိုလျှောက်နိုင်တဲ့အပြင် အဲ့လိုလျှောက်နိုင်အောင် MSI ကကူညီပေးတယ်။
MSI နဲ့သာတိုင် ပင်ကြည့်ပါ သူတို့အကောင်းဆုံးအကြံပေးစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပညာသင်ဆုလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်စာရင်းနည်းနေရင်တောင်မှ စိတ်ဓါတ်မကျဘဲ MSI နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ကိုဆွေမျိုးတွေက အကြံပေးတယ်။ သမီးရဲ့ဆွေမျိူးတွေကလည်း MSI နဲ့ပဲ American ကိုသွားတာ။ အမှတ်နည်းတဲ့သူတွေ လည်းစိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ ကိုယ်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းရဲ့ Activities တွေမှာဝင်ပါပါ။ Scholarship လျှောက် တဲ့အခါမှာ ဒါတွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။ ညီမဆိုရင်လည်းကျောင်းကလုပ်တဲ့ပွဲ တွေမှုာ Presenter အနေနဲ့ဝင်ပါတယ်။ အားကစားဘက်မှာတစ်ခုခုထူးချွန်ရင်လည်း Scholarship လျှောက်လို့ရတယ်။
၆။ Management ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ Management ဘာသာရပ်မှာမှ Marketing ဘာသာရပ်ကိုထပ်ပြီး အထူးပြုယူရတဲ့အကြောင်းရင်း။
ညီမရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်က အကယ်၍အနာဂတ်မှာစီးပွားရေးကိုတည်ထောင်ချင်ရင် ဈေးကွက်ကိုဘယ် လိုစီမံရမလဲဆိုတာသိရမယ်။ ဈေးကွက်ဟာနေရာတိုင်းအတွက် လိုအပ်တယ်။“ညီမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ပဲ။” life would get worst if there is no marketing. အဲဒါကြောင့်ညီမက Management နဲ့ Marketing (၂)ခုလုံးကိုသင်တာ။
၇။ Webster University (Thailand Campus) က Internship (အလုပ်သင်) နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘယ်လိုတွေ စီစဉ်ပေးလဲ။ Internship (အလုပ်သင်) ကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ/ မရှိ။
Internship (အလုပ်သင်) ကို Summer Semester ရောက်တိုင်း Bangkok Campus နဲ့ Cha-Am Campus မှာ Job Fair တွေစီစဉ်ပေးတယ်။ Internship (အလုပ်သင်) လုပ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေ က အပြင်ဗဟုသုတလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေရတယ်။ ဘွဲ့ရပြီးအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိပြီးသားသူတွေက အခွင့်အရေးသာတယ်။ ထိုင်းမှာရှိတဲ့ထိပ်သီးကုမÜကြီးတွေကနေလာပြီးညီမတို့ လိုကျောင်းသူ/သားတွေကို အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Interview ခေါ်တယ်။ Internship(အလုပ်သင်) ကာလကို ကိုယ်အဆင်ပြေရင်ပြေသလို (၃) လကနေ (၆)လအထိလုပ်လိုိ့ရတယ်။ Semester တိုင်းမှာ လျှောက်လို့ရတယ်။ Summer Semester တစ်ခုလုံးလုပ်ရင် Credit က (6) Credit ပဲရတယ်။ Internship (အလုပ်သင်) မလုပ်ဘဲစာသင်မယ်ဆိုရင် (9) Credit ရတယ်။ Cha-Am Campus မှာ Job Fair လုပ်ရင် Hotel တွေများတယ်။ ဥပမာ- Anadra, Hilton, Chiva-som တို့လို Hotel တွေ Bangkok မှာကတော့ Microsoft, NGO, Food Pander တို့လို Company ကြီးတွေ မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ တခြားကုမÜဏီတွေအပြင် Bangkok Shangri-La တို့ပါတယ်။
၈။ Myanmar Search International(MSI) ကိုဘယ်လိုသိပြီး MSI နဲ့ကျောင်းအပ်ပြီးပညာသင်ဆုလျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ။
မန္တလေးမှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကပဲ MSI နဲ့ကျောင်းအပ်ပြီး Webster University (Thailand Campus) မှာတက်ဖို့ Recommend ပေးတယ်။
၉။ Bachelor ပြီးတဲ့အခါရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်။
ကုမÜဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအရင်ယူမယ်။ ပြီးရင် Master ကိုဆက်တက်ပြီး ပညာအတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေဆက်ပြီးယူမယ်။
၁၀။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ် Webster University (Thailand Campus) မှာ Management (Marketing) ဘာသာရပ်နဲ့ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။
အဲဒါတော့မသေချာသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်။ Thailand Campus ရဲ့ Webster စီနီယာတွေရဲ့ တစ်ဆင့်စကားနဲ့တစ်ဆင့်သိရတာကတော့ Webster ကျောင်းပြီးသွားရင် ဘန်ကောက်မှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Europe Company တွေမှာရာထူးနေရာ ကောင်းကောင်းနဲ့သင့်လျော်တဲ့ လစာကောင်းကောင်းတွေရတယ်လို့တော့သိရတယ်။ အခုလောလော ဆယ်ညီမရဲ့ အတွေးကတော့ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်အတွေ့အကြုံရအောင် Own Business ကိုစပြီး လုပ်မယ်။
၁၁။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်က Management နဲ့ Marketing ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။
ညီမတက်နေတဲ့နိုင်ငံကထိုင်းမှာဆိုပေမယ့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာထက် ဒီမှာက Opportunities တွေအရမ်းများတယ်။ ညီမတို့လိုကျောင်းသားတွေအတွက် သင်ယူစရာနဲ့လေ့ လာစရာတွေအရမ်းများတယ်။ ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကလည်း Job Opportunities တွေအများကြီးပဲ။
၁၂။ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ Marketing ဘာသာရပ်မှာ ဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးသင်ယူရလဲ။
အခု Marketing class မှာတက်နေတယ်။ Marketing နယ်ပယ်မှာကျယ်ပြန့်ပုံတွေ၊ Marketing ရဲ့ အရေးကြီးပုံတွေ အကြောင်းအရာအများကြီးတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သင်နေရတယ်။
၁၃။ ပြည်ပမှာကျောင်းသွားတက်မယ့်ကျောင်းသူ/သားတွေကို ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘယ် လိုတွေအကြံပေးချင်လဲ။
အမေရိကန်ပညာရေးကို ရွေးချယ်လိုက်တာက ကိုယ်သင်နေရင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘာ သာရပ်ကို ရွေးချယ်ပြီးသင်လို့ရတယ်။ So in my opinion you don’t need to thinkalot about majors.
၁၄။ ကျောင်းတက်ရင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားဖြေရှင်းပုံ။
ကျောင်းတက်နေတဲ့သူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲကတော့ကျောင်းမှာသင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို နားမလည်တဲ့ဟာရှိမှာပါ။ ဒါကတော့နိုင်ငံခြားမှာစာသင်တဲ့ ကျောင်းသူ/သားတိုင်းကြုံတွေ့ရမှာပါပဲ။ ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတွေနဲ့ Professor တွေကိုရှာပြီးအကူအညီယူလို့ရတယ်။